३ करोड माग: नदिए ‘ब,म’ राखेर ध,म्की, प्रहरीलाई खबर गरे घर पनि उ,डा,इदिने चेतावनी ! – Taja Khawar
३ करोड माग: नदिए ‘ब,म’ राखेर ध,म्की, प्रहरीलाई खबर गरे घर पनि उ,डा,इदिने चेतावनी !
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र २७, २०७८ समय: १६:५०:३८
काठमाडौँ । पुरानो बानेश्वरस्थित मातृका आँखा अस्पतालमा नक्कली ब, x म राखेर फि, x रौ, ती माग्ने समूहलाई प्रहरीले प,क्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले ब, x म राख्ने समूहका सदस्यलाई पक्राउ गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा धादिङको त्रिपुरासन्दरी गाउँपालिका ५ घर भई हाल काठमाडौं फुटुङ बस्नेत २५ वर्षीय आशिष कुँवर र उनका सहोदर भाइ २० वर्षीय अभिषेक कुँवर छन्। कुँवरद्वय सहोदर दाजुभाइ हुन्। उनीहरु होटलमा काम गर्दै आएका थिए। रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका १ का ४० वर्षीय अम्मरबहादुर रोक्का मगरलाई पनि पक्राउ गरेको छ।
काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुख अशोक सिंहले आशिष केही समयअघि आँखाको उपचार गर्न त्यस अस्पतालमा पुगेको र त्यसबीचमा उनले त्यहाँ काम गर्ने एक चिकित्सकको पृष्ठभूमीबारे बुझेपछि बम राखेर पैसा उठाउने योजना बनाएको दावी गरे। प्रहरीले अस्पतालको तेस्रो तलामा शौचालयभित्र ब, म राख्दै गर्दाको सिसिटिभी फुटेजका आधारमा अ, x भि, x यु, क्तको पहिचान गरेको छ।
राजधानीको एक सहकारीबाट १७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका आषिशले बेल्जियम जाने तयारी गरिरहेका थिए। त्यसैका लागि पैसा उठाउन नक्कली ब, x म राखेर पैसा उठाउने योजना बनाएको प्रहरीले दावी गरेको छ। ‘प्रहरीलाई खबर गरेमा हाम्रो हातमा रिमोट कन्ट्रोल छ, ४ वटा ब, x म तपाईंको घरमा पनि हुनसक्छ वा अन्यत्र पनि हुन सक्छ, अस्पताल र तपाईंको घर परिवारसमेतलाई अत्यन्त ख, x तरा छ, हामीले भनेको नमानी आलटाल गरेमा ब, x म प, x ड्का,इ अस्पताल र घर परिवारसमेतलाई ध्व, x स्त पा,रिदिन्छौँ’ भनि ती चिकित्सकलाई फोन गरेर ध, x म्की दिइएको पनि दावी गरिएको छ।
प्रहरीका अनुसार ती चिकित्सकसँग ३ करोड रुपैयाँ मा,गिएको थियो। अभियुक्तले प्रहरीलाई खबर गरे ब, x म प, x ड्का, x इदिने ध, x म्कीसहितको म्यासेज पनि गरेका थिए। अ,भियुक्तहरुले यूट्युब हेरेर टाइम ब, x मजस्तो शं, x का, स्पद बस्तु बनाउन सिकेको बयान दिएका छन्।
Last Updated on: September 12th, 2021 at 4:50 pm